I-iPhone 14 izoletha ukuthuthuka okubalulekile kwikhamera engaphambili ngokusho kukaKuo | iPhone News
U-Alex Vicente | 20/04/2022 18:00 | iPhone 14, Izaziso
Amahemuhemu mayelana nentuthuko yekhamera ezolethwa yi-iPhone 14 abelokhu ehlala njalo ezinyangeni ezedlule. Manje ngumhlaziyi owaziwayo uMing-Chi Kuo osilethela a ukubikezela okusha nemininingwane mayelana nentuthuko ezolethwa ikhamera yangaphambili ye-iPhone 14, okuyothi ngemva kweminyaka emibili cishe kungekho ntuthuko, izoba nokuthuthuka kwekhwalithi yayo.
Ngokusho kukaKuo, amahemuhemu amane amamodeli we-iPhone 14 (womabili ama-Pro ne-non-Pro) azofika nawo. i-autofocus ethuthukisiwe nembobo enkulu lokho kuzovumela ukuthwebula ukukhanya okungcono nesithombe. Umhlaziyi ngokwakhe ukuveze ngale ndlela ekhasini lakhe le-Twitter:
Ikhamera yangaphambili kuzo zonke izinhlobo ezine ezintsha ze-iPhone 14 kungenzeka ithuthukiswe ibe yi-AF (autofocus) kanye nendawo yokuvula ezungeze i-f/1,9 (vs. FF (i-fixed focus) kanye ne-f/2,2 ku-iPhone 13). Usekelo lwe-AF kanye nenombolo engu-f ephansi inganikeza ukujula okungcono komphumela wenkambu wemodi yesithombe ozishuthe sona/sokume ngobude. Ngaphezu kwalokho, i-AF ingaphinda ithuthukise umphumela wokugxila we-FaceTime/ikholi yevidiyo/ukusakaza bukhoma.
Lezi zinguquko zingaba kuhle ekuthuthukiseni izithombe ozishuthe zona noma imodi yokuma ngobude ngokwayo ngekhamera yangaphambili. Lezo zithombe esizithatha ekukhanyeni okuphansi zizoba nekhwalithi engcono kusukela manje ngokuthuthuka kwe-Apple. Futhi amathuba e-FaceTime engcono azokhula njengoba uKuo ngokwakhe ekhombisa.
Uma la mahemuhemu ayeyiqiniso, ngokuqinisekile I-Apple izogcizelela kakhulu ekuthuthukisweni kwe-FaceTime ye-iOS 16 ngakho-ke kuzodingeka sibhekisise kakhulu i-WWDC elandelayo. ukubona ukuthi yiziphi izinkomba ezisinika zona futhi sikwazi ukuzihlobanisa nalezi zibikezelo.
Lokhu kuthuthukiswa kuzohambisana nomklamo omusha wamamodeli we-Pro, lapho sizoshiya khona inothi ngemuva futhi isikrini sizokhishwa kabili ngenzwa ye-FaceID kanye nekhamera ye-iPhone.
I-Apple ibilokhu isalela ngemuva kwezinye izinhlobo ekuthuthukisweni kwayo kwikhamera yangaphambili yemishini yayo, ebangeni le-Mac kanye naku-iPhone ne-iPad, kodwa kubonakala sengathi, ngokuhamba kwalolu bhubhane, ukukhula kwezingcingo zevidiyo kanye nesidingo. ukuze uxhumeke ngokuphelele noma yikuphi, qala ukuthola amabhethri kulesi sici. Noma kusho abahlaziyi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 14 » I-iPhone 14 izoletha ukuthuthuka okubalulekile kwikhamera yangaphambili ngokusho kukaKuo
Isibuyekezo esisha sebhethri le-Apple's MagSafe manje siyatholakala